चलिरहेको स्कुटरमा कांग्रेस युवा नेतृ दिपाको घाँ’टीको सि’क्रि ता’नेपछि….हेर्नुहोस ! – Taja Khawar
चलिरहेको स्कुटरमा कांग्रेस युवा नेतृ दिपाको घाँ’टीको सि’क्रि ता’नेपछि….हेर्नुहोस !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ०१, २०७८ समय: ११:२२:०४
धनगढी – कैलालीमा मोटरसाइकल दु’र्घटनामा परी एक महिलाको मृ’त्यु भएको छ । जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ गोराङ्गेमा गएराति ८ बजेतिर पूर्व’बाट पश्चिमतर्फ आ’उँदै गरेको से ४ प ९२५६ न’म्बरको मो’टरसाइकलले ठ’क्कर दिँ’दा महिलाको मृ’त्यु भएको जि’ल्ला प्रहरी
सात बर्ष पछि पहिलो पटक श्रीमान श्रीमती भेट्दा डाको छोडेर रोए बल्ल खोले बास…
का’र्यालय कै’लालीले बताएको छ । कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतिक बिष्टका अनुसार पहिचान न’खुलेकी अ’न्दाजी ३५ वर्षीया ती महिलाको टीकापुर अस्प’तालमा उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको हो । मोटरसाइकल र चालक ३६
वर्षीय प्रेम साउ’दलाई नि’यन्त्रणमा लि’ईएको प्रहरी प्रवक्ता बि’ष्टले जानकारी दिए । म’हिलाको श’व भने टी’कापुर अस्प’तालमै रहेको उनले जनाए । **फाइल तस्बिर **सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, ****
Last Updated on: August 17th, 2021 at 11:22 am